Ogaden News Agency (ONA) – Qudbadi Gudomiyaha ONLF ee Shirkii London ” Waqtigii Gumeysigu Waa dhamaad” Kobtan ka daawo iyada oo Filim ah.
Qudbadi Gudomiyaha ONLF ee Shirkii London ” Waqtigii Gumeysigu Waa dhamaad” Kobtan ka daawo iyada oo Filim ah.
Gudomiyaha Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya Admiral Maxamed Cumar Cismaan ayaa kasoo jeediyay warbixin aad loogu baahna shirkii london ee 29 January 2012 lagu qabtay magalada London. Waxa uu gudomiyuhu ka xog waramay xaalada shacabka Somalida Ogadeniya ay ku suganyihiin waqtigan, isaga oo kasoo waramay taarikhdii halganka shacabka Somalida Ogadeniya uu bilowday iyo sababaha uu halganka Ogadeniya illaa waqtigan uu usocdo.
Waxaa hadalada Qudbada Gudomiyaha ka mid ahaa marku ka hadlayay sooyaalkii halgamadi soo jireenka ahaa ee Ururka ONLF dhaxlay Sidan.
Mabda’a Ururka ONLF waxa weeye in laga xoreeyo Ogadeniya Gumeysiga!
Gobanimodoonkii bilowday 1940kii iyo ka hor ayaa ka socda Ogadeniya!
Shacabka Ogadeniya ma ay u hoggaansamayaan Gumeysiga.
Somaliya Dhibaatada ay iyagu iskuhayaan waxaa lamid ah Midkay ku hayaan Halganka Ogadeniya.
Sidoo kale Gudomiyaha waxa uu ka hadlay Shacabka Jammuhuriyada Somaliya iyo marxaladaha kala gadisan ee siyasadeed ee Burburku ugeystay waxaana kamid ahaa hadaladiisa ereyadan hoose.
Mabda’a Ururka ONLF waxa weeye in Somaliya Somali loo daayo.
Somaliya haddii faragalinta laga dhaafo hubaal weeye in muddo yar gudaheed inay ku xalinayso mashaakilka jira.
ONLF Iyo Ethiopia Waxa ka dhexeeya Daggaal Hubaysan.
Gudomiyaha Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeniya waxa si qotto dheer uu ugaga hadlay shirkan Mabda’a ururka ONLF ee ku aadan wadahadalka. Waxa gudomiyhu uu kasoo sheekeyay hagardaamooyin iyo khayamo badan oo ay dowlada Ethiopia soo geysatay isla markaasna ay si shirqool ah oo badheedh ah ay ku dishay ergooyin ururka ONLF wada hadal ugaqeyb galay hada ka hor. Maadama uu gumeysigu dilay ergadii uruka ONLF matalaysay ee wadahadalada uga qeybgashay hadda ka hor, waxa uu gudomiyuhu sheegay in ururka ONLF uu gaadhay go’aan ah
In aan Ethiopia lala hadal illaa la helo
1. Meel Ammaan ah oo lagu wada hadli karo iyo
2 Garab sadexaad oo dhexdhaxaadiya.
Waxa gudomiyhu uu shirkan ka caddeeyay in Ururka ONLF diyaar u yahay in uu la hadlo Ethiopia haddii ay Ethiopia fuliso shurudahaas kore kaliya. Sidoo kale waxa uu sheegay in marar badan ay suuqa soo gashay inay Ethiopia rabto wada hadal. Waxa uu shacabka Somalida Ogadeniya iyo taageraysha ururka ONLF uu u sheegay in aysan jirin illaa hadda wax wada hadal ah oo Ethiopia iyo Ururka ONLF ay miis kusoo wada fadhiisteen oo illaa hada dhacay. Waxa uuna u balan qaaday haddii ay dhacdo in shacabka Somalida Ogadeniya uu uruku la tashan doono oo aan waxba laga qarin doonin. Sidaas awgeed inaysan suuqa ka dhageysan waxyalaha cadowgu sheego.
Gudomiyuhu waxa uu shacabka Somalida Ogadeniya ee Halganka ku jira uu kula dardaarmay inay xoojiyaan halgankooda. Ethiopia iyo inaga waxa inaga dhexeeya daggaal- iyaguna waa gumeysi inana waxa aynu nahay gobanimo dirir sidaas awgeed waa in halganka la xoojiya oo dhankasta laga dadala.
Gudomiyaha waxa qudbadisa kamid aheyd in waqtigii Gumeysigu dhamaaday, oo caalamka hadda gumeysi loo dulqaadan karin, Goobo yar oo Ogadneiya kamid ah ayay kuso hadheen Gobahaasna waa ay ka dhamaaneysa dhowaan. Aduunka iyo bulshada Somaliyeed iyo Somalida Ogadeniyana waxa uu ugu baaqay in cadowgaas gumeysiga ah la iska kor qaado.
Hadaba Qudbadi Gudomiyaha iyo shirkii London ka dhacay qeybo kamid ah Filimka hoose ka boggo.
scwb salaan kadib aad baan uga mahad celinayaa maxamed cumar sida uu u hadlayo waana ku raacsanahay maansha allaah waana soomaali waxgarad ah waxaan odhan lahaa wadan keenii soomaaliya waan aragnaa itii xorta ahayd meesha ay marayso iska daa intii horay gumaysiga ugu jirtay’e hadaynu nahay soomaali nfd,ogaden iyo kuwii xorta ahaan jirey hadase aan ahay hala isigu yimaado geed hoostii hana lawada hadlo oo haloo heshiiyo mid dubka inooga eg oo dhiigeena shilimo ku cuna iyo gumaysiga asalka ahba maanta waa maalitii loo baxsanjirey dadka kulansada cilmi diin iyo maadiba, caqli,daacadnim,karti, dulqaad iyo samir waxaana soomaali aragtaa tii ka dhacday taleex waxaa inoo wanaagsan in la xoojiyo arimahaas oo kale soomaalina laysu soo dumo haad baa ka dhergaye. scrb.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cumar he is realy leader waxaan odhan lahaa dadka somalidu guud ahaan hadii ay haysan lahaayeen leaders like mahamed omar dhibaatada way kabixi lahaayeen intaas kadib waxaan ugu baaqayaa dhamaan shacabka reer ogaden in ay siwayn umidoobaan si ay hawsheenu ufududaato ugana baxno dhibaatada inaguraagtay waxaana leeyahay qaybsanaanteena iyo kagaabinteena taageerada halganka ayaa ah sababta koowaad ee gumaysigu udhamaan la yahay markaas soomaalida reer ogaadeeniya waxaan leeyahay walaalayaal midooba oo israaca oo waad ogtihiin sababta uu inoo haysto gumaysigu in aytahay qaybsanaanteena markaas waa in aynu qaadano daawada qaybsanaanta oo ah midnimo then waxaad sifudud uhananidoontaan sharaftiina sidaas aynu yeelo walaalayaal ogaadeeniya haxorawdo soomaaliya guud ahaan ha israacdo hanawada xorawdo ogaden guul somaliya guul
Maxamed cumar cismaan, Waa somali dhab ah, oo ka damqanaya dhibatada haysata Somalida hadey yihiin kuwa ku hoos nool Gumeysiga iyo kuwi xorta ahaa ee hada gumeysiga doontay.
Dhibatada somalida waxa looga baxi kara haddii qabyalada laga dherado. iyo jaajusinta dhulka gadatay ee lawada yaqaano.
halganka Ogadeniya ka socda haddii la xoojiyo oo somali oo dhan ay isugu tagto waxa filaya in cadowga somaliyeed laga adaan lahaa oo dhulkena la qeybsadeen.
Gudomiyaha onlf meel fog ayuu wax ka arkaa…
Ethiopia marna hala heshiinina iyada oo xoriyada ummada oggolaan. danta somalidu waa taas.
Maan sha allah runtii gudoomiyuhu waxba kama tagin kheyr allaha siiyo meel fiicanbaa maanta halgan keenu marayaa waxa saaran shacbiga reer ogadenia dhamaan dadaal iyo isku duubni insha allah waa guulaysanaynaa
gool iyo gobonimo
Good speech Mr President!!